Iinkonzo zeMacBook ngeTouch Bar 15 "ziqokelela ulibaziseko ekuhanjisweni kwaye ngoku zikwi-13" | Ndisuka mac
IMacBook Pro ene-15 ″ yeBhari yokuChukumisa iqokelela ulibaziseko ekuhanjisweni kwaye ngoku ikwi-13 ″
Ewe, kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sibonile ukuba ezona khompyuter zinkulu ze-Apple zibonisa ixesha elide kuneliqhelekileyo lokuhambisa, kwiintsuku ezingama-2-3 emva kokufaka iodolo kwaye oku kuphakamisa urhano lokuba iApple icwangcise ukuhlaziya kuphela iimodeli ngescreen esikhulu kwaye yiyo loo nto ulibaziseko ekuhanjisweni. Oku kulibaziseka kokuthunyelwa kweMacBook Pro ngeTouch Bar i-intshi ezili-15 akugcinwa nje kuphela, kodwa kukwahlala ixesha elide kwaye ngoku Ukuthunyelwa kwimeko yeSpain kula maqela kubalwa ngoJuni 13-16. Ukongeza, ulibaziseko longezwa kwizixhobo ze-intshi ezili-13 ngeTouch Bar kunye neMacBook Air, ephawula umhla wokuhambisa nge-7 kaJuni kwimeko yevenkile yaseSpain.
Ngokucacileyo asithethi ngale nto ukuba inkampani yaseCupertino inengxaki ngemveliso yale MacBook Pro, kodwa kukuba ukubona amarhe amva apho kuboniswe ngokucacileyo ukuba kukho ithuba lokuba ngalo Mvulo bazakusivezela ezi-5 zintsha IMacBook Pro eneeprosesa kunye nememori ephuculweyo, asinakukhetha ngaphandle kokucinga ukuba banengxaki ethile ngomgca wendibano okanye baphelelwe ngokuthe ngqo kwisitokhwe ukufumana iMacBook Pro entsha. I-12-intshi iMacBooks kunye neMacBook Airs zikwaphawula ngoJuni 7 njengomhla wabo wokuthumela ngolindelo Ukuba siyithenga ngewebhusayithi yeApple, kukho into engaqhelekanga akunjalo?
Konke oku kuyamangalisa kuba iiMac azikhange zibenangxaki yesitokhwe kwezi nyanga zokuqala zonyaka kwaye abasebenzisi abagqiba ukuthenga ezi zixhobo ngoku bangaya kuzithatha ngosuku olulandelayo kwivenkile yeApple okanye balinde ukuhanjiswa okucwangciselwe ukugqithisa igama eliphambili le-Apple. Ngaba kunokwenzeka ukuba konke oku kuvela kutshintsho lweeprosesa zale Mac?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » IMacBook Pro ene-15 ″ yeBhari yokuChukumisa iqokelela ulibaziseko ekuhanjisweni kwaye ngoku ikwi-13 ″